China ịkwanyere na mpụga mgbidi nghọta efere emepụta na suppliers | Ogologo
VINYL akụkụ & ngwa mma
Exkwanyere mputa Mgbidi Mgbidi Mgbapụta bụ mmezigharị nke ihe ndozi ụlọ, PVC Mpụga Mgbidi Mgbidi ga-abụ ihe ndị ọzọ kachasị mma maka agba mgbidi dị na mpụga na tile seramiiki. Exkwanyere Mpụga Mgbidi Mgbidi Mwube nke PVC bụ PVC (PVC), nke kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ụdị ụdị ụlọ, dịka obodo obibi, ebe obibi, ụlọ ọrụ na ụlọ ochie. Exkwanyere Mpụga Mgbidi Mgbidi Mgbidi ahụ doro anya, dị nkenke ma na-enwu gbaa, nke oge a, nke nwere nguzogide ihu igwe. Outerkwanyere n'èzí efere na-ekpuchi efere ka owuwu ahụ dị mfe ma dị mma ma mara mma, nwere ike iguzogide ụdị ihu igwe ọ bụla na nrụrụ corrosion, dị mfe ịwụnye. Ma ọ bụ na mmepụta ma ọ bụ na usoro mmepụta ihe, nke bara uru, enweghị mmetọ gburugburu ebe obibi, yana iji ihe ọgbara ọhụrụ, bụ ihe eji achọ mma gburugburu ebe obibi.
Exkwanyere Mpụga Mgbidi Mgbidi Mpụga PVC
1. PVC elu mgbidi nghọta efere ọdịdị nke osisi udidi imewe, na simpleand eke mara mma, a dịgasị iche iche nke dị iche iche na agba na udidi imewe. Usoro nke PVC mgbidi efere nwere ike agwakọta ya, enwere ike jikọta ya na ihe ịchọ mma mgbidi ndị ọzọ, ụdị dị iche iche nke ọdịbendị dịka okwute ọdịnala, brik eji achọ mma, ejiri ya n'akụkụ dị iche iche, iche echiche, ụdị mgbanwe na-agbanwe agbanwe, ịhapụ ezigbo ọhụụ ọhụụ .
2. Anti ịka nká, magburu onwe weathering nguzogide, ogologo ọrụ ndụ nke PVC elu mgbidi nghọta efere site oru oma na ogologo-eme mgbochi ultraviolet stabilizer esịnede pụrụ iche mejupụtara, mgbochi ịka nká, mgbochi radieshon nwere ike iguzogide nile di iche iche nke ọjọọ ihu igwe, na a dịgasị iche iche nke eke weathering mmetụta nwere ike ogologo oge dị ka ihe ọhụrụ, obviates na scraping mottled ịkwụsị, besmear ọzọ refurbished na nsogbu ndị ọzọ, mee ka gị na mmezi ozugbo na ihe niile, ndụ nke ruo afọ 30 n'elu.
3. magburu onwe anụ ahụ Njirimara na chemical Njirimara nke PVC Mpụga Wall nghọta efere na ezi ike, elu iguzogide mmetụta nke mpụga ịtụnanya, nwere ike dabere na dị iche iche engineering imewe na usoro chọrọ nke aka ike, ekwe mgbanwe udi, agaghị emebi emebi mgbape, adịghị mfe ọkọ, acid na alkali corrosion na mmiri vepo alulu, ala thermal conductivity, onwe imenyụ ire ọkụ retardant, nwere ike n'ụzọ dị irè na-egbu oge mgbasa nke ọkụ.
4 Mfe echichi, ezi ike ịzọpụta, elu keukwu uru ịkwanyere mgbidi panel nwụnye usoro dị mfe na ngwa ngwa, zuru akọrọ ọrụ, ike na a pụrụ ịdabere na, na-azọpụta oge na oru, na-ebelata ndị na-ewu oge, ukwuu mbenata echichi na-akwụ ụgwọ. Gbanye ihe dị n'ime ya nwere ike ịdị mfe ịwụnye ihe mkpuchi mgbidi, nke mere na nsonaazụ mgbidi mkpuchi dị mma. Karịsịa dabara maka mgbanwe nke mgbidi ochie, n'agbanyeghị agbanye ochie mgbidi bụ brik ma ọ bụ agba, nwere ike ịbụ ozugbo na iwu nke mgbidi ochie.
Ngwaahịa dị n'usoro mmepụta ma ọ bụ n'usoro injinịa nke gburugburu ebe obibi anaghị ebute mmetọ, yana ojiji ọgbara ọhụrụ, bụ ezigbo ihe ịchọ mma gburugburu ebe obibi.
◇ ◇dị efere na nkwakọ ngwaahịa:
Pattern Nlereanya a: European plate plate,
Length Ogologo ọkọlọtọ a: Ogologo 4 mita.
Ojiji: mgbidi mma ụlọ na n'uko mma isi ngwa: malite, J-mmanya, mechie, mpụga nkuku kọlụm na nkuku kọlụm, cornice board, na na.
◇ Ihe mgbakwunye niile dị n'elu site na iji nrụnye dịkwuo mfe, ọdịdị nke nhazi, na nkwụsị nwere ọdịiche gbasara ohere nke mgbasa na mgbatị.
Mmepụta Usoro nke PVC Mpụga Mgbidi Mgbidi
Nke gara aga: Classickwanyere Classicnyịnya Omuma PVC
Osote: Igwe anaghị agba nchara Solar Path Light (2-Pack)